Bakka ajjeechaan hin dhaabannee fi gaafiin Oromoo deebii hin argannetti falli hiriiraa fi qabsoo itti fufuu qofa - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Bakka ajjeechaan hin dhaabannee fi gaafiin Oromoo deebii hin argannetti falli hiriiraa...
Bakka ajjeechaan hin dhaabannee fi gaafiin Oromoo deebii hin argannetti falli hiriiraa fi qabsoo itti fufuu qofa
Finfinneen, Buraayyuu fi Sabbataan nurraa fudhataman jenneeti kan biyyaa fi biyya alaattis daanditti baane. Amma garuu, Oromiyaan guutummatti kan jirtu harka Woyyaaneeti.
Imalli baatii afur, inni Oromoo guutummatti boochisee fi onnee lammii madeesee, iddoo amma jirru kanaan nu gayee jira. Yeroo dhaabannee gaafii ciccimaa ufgaafannuu fi wolgaafannuu; akkasumas haalli yoo hayyame teennee mari’achuu qabnu irra geenneerra. Kana booda kan du’e awwaalannee, isa madaaye yaalannee fi abbaa-biyyummaa waan jedhu dagannee jiraanna moo gatii barbaachisu kaffallee gumaa baafanna, Oromiyaa harkatti deffanna?
Hubadhaa, gaafii gafate malee gaafii isaaf deebii tokkollee hin arganne, Oromoon. Gaafii haqaa gaafachuu isaatiin Oromoon daran ajjeechaaf saaxilame; kumaatamaan hidhame; barataa heddutu barnoota irraa ari’ame. Bifa takkaa argee hin beekneen qe’een Oromoo Agaaziin weerarame. Naannoon isaa bulchiinsa woraanaa jalatti galfame.
Finfinnee, Burraayyuu fi Sabbataan nurraa fudhataman jenneeti kan biyyaa fi biyya alaattis daanditti baane. Amma garuu, Oromiyaan guutummatti kan jirtu harka Woyyaaneeti. Dachii teenna dhiigaan dhiquun akka waan isaan hanqatee tuffii irraa boodaa ‘maalfiddan’ jedhuun dirii Finfinnee irraa hanga baadiyaatti diriirfameen Oromiyaa too’ataa fi qabeenya isii fe’ataa/itti taphataa kan jiran.
Qaanqee qabsoo akka haaratti Sadaasa 12 kan qabsiisan sabboontotaa fi gootota Oromooti. Sabbontonni Oromoo kan daanditti bayaniif ajjeechaa, saamichaa fi hidhaa balaaleffachuudhaaf ture. Hedduun ajjeechaa fi hidhaa obboleewwan isaanii irratti raawwatame balaaleffachuuf gootummaan daanditti bayan manatti hin deebine, garuu. Hedduu isaanii kan dhabne du’aan. Worri du’a irraa hafe kan jiru mana hidhaa keessatti gidiramaa fi beelaan akaayamaati. Madaayee qaama kan hir’ate boqonnaa jireenyaa haarawa, ulfaataa fi dukkanaayaa, dhiibutti jiru.
Rasaasni Woyyaaneen baatii afurii oliif, halkan-guyyaa, Oromoo irratti roobsiste isa dammaqee mitii isa rafe kan kaasu- gurri duude akka dhagayu kan taasisu. Tankaarfiin sukkanneessaan Oromoo irratti fudhatamaa jiru isa uf dagates kan daanditti baasu, dhiigni lammii maaliidhaaf akka dhangala’e akka gaafatuuf kan dirqisiisuudha. Sabboontonni qabsoo isaanii daran finiinsuu, gootonni gootummaa isaanii hundatti argisiisuu, worri biyya alaa qabsoo tin’isuu fi inni yakka dhala namaa irratti raawwatamu jibbu hundi deeggarsa #Oromoprotests’f ifatti mul’isuu kan qabu yoomuu caalatti amma.
Kanumaan wolqabatee, sadarkaa addunyaatti bifa wolirraa hin cinneen hiriirri nagaa geggeeffamuu fi yaaliin ummata biyyatti miidhame gargaaruuf taasifamu qabsoo kana hedduu kan utubuudha. Sochiin biyya alaatti ta’u isa biyya keessaaf deeggarsa. Keessumattuu, Woyyaanee salphisuu fi michuu malee dirreerratti hanbisuu irratti shoorri inni taphatu akka salphati kan ilaallamuu miti. Qabsoon itti fufa!
Previous articleOromoo ajjeesaa fi Oromiyaa zoonii woranaa fakkeessaa ‘baadii raawwatameef dhiifama’ jechuun tuffiidha
Next articleGumiin Mirga Namoomaa Itoophiyaa woraanni Itoophiyaa Oromoo heddu ajjeesuu, gudeeduu fi gidiruu saaxile